मनोहरी खोला मसानघाटको किनारमा बसिरहेका उनलाई मसानघाटमै छोरी र बैनी आए भेट्न, खुशीले उनको थामिएन आँशु (भिडियोसहित) – Khabar Chautari
मनोहरी खोला मसानघाटको किनारमा बसिरहेका उनलाई मसानघाटमै छोरी र बैनी आए भेट्न, खुशीले उनको थामिएन आँशु (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २०, २०७७ समय: १३:३९:२२
काठमाण्डौ । यो चिसो मौसममा खोलाको छेउमा माटोको ओडार माथि भएको छाप्रोमा सबै आफ्ना आफ्न्तिहरु हुँदा हुँदै पनि कोही नभएको जस्तो गरी बस्नुको पिडा यी लामा थर गरेका यी पुरुषलाई सोध्दा थाहा हुन्छ । श्रीमतीकै कारण आफ्नो यो अवस्था भएको कुरा सुनाउने उनले आफ्ना दुःखका दिनहरु सम्झिएर निकै नै भक्कानिए ।
यो उनको पहिलो अवस्था हैन । उनीसंग पहिलो पकट भेट्दाको अवस्थाको भिडियो हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यही भिडियोलाई हेरेर उनको छोरी र बहीनि यतिबेला उनलाई भेट्न भनेर नै उनी बसेको त्यो खोलाको छेउका झुप्रोमा पुगेका छन् । त्याहाँ पुग्दाको उनको खुशी र उनको कुरा सुन्दा नरुनेसायदै होलन् । श्रीमतीकै कारण आफ्नो यो अवस्था भएको बताउने उनी यसरी सुनाउँछन् आफ्नो वास्तविक पिडाको कथा । (भिडियोसहित)
जानी राखौं , मेवा कुनबेला खाने, कुन बेला नखाने ?
मेवा कुनबेला खाने, कुन बेला नखाने ?१. गर्भवतीले नखाने:विभिन्न अवस्थामा मेवाको सेवन शरीरका लागि फाइदाजनक भएपनि गर्भावस्थामा भने यसको सेवन शरीरका लागि हानीकारक हुनसक्छ । यसले गर्भावस्थामा गर्भपात गराउन सक्छ । खासगरी, मेवाले गर्भाशयलाई खुम्च्याउने गर्छ । जसले गर्दा गर्भपात हुने खतरा उच्च हुन्छ ।२. स्तनपान गराउने महिलाले खानबाट बच्न: गर्भावस्थामा त मेवाको सेवन गर्नै हुँदैन । सुत्केरी महिलाहरुलाई पनि स्तनपान गराउञ्जेल मेवाको सेवन नगर्न नै सल्लाह दिने गर्छन् । किनकी मेवामा पपाइन नामक विषाक्त हुन्छ,जुन ससाना बच्चाका लागि हानीकारक मानिन्छ । यसबाहेक, बच्चा जबसम्म एक वर्षको हुँदैन, उनीहरुलाई मेजवा नखुवाउन नै सल्लाह दिने गरिन्छ ।
३. एलर्जीको सम्भावना:केरोटेनेमिया नामक रोगबाट प्रभावित व्यक्तिले मेवा कहिल्यै खानु हुँदैन । किनकी मेवामा लेटेक्स नामक पदार्थ हुन्छ, जसले केरोटेनेमियाबाट प्रभावित व्यक्तिमा छालाको एलर्जीको समस्या निम्त्याउन सक्छ ।४. उच्च रक्तचापको औषधी खाने व्यक्तिले:मेवाले शुगरको स्तर कम गर्छ । त्यसैले, न्युन रक्तचाप भएका व्यक्तिले झुक्किएर पनि मेवा खानु हुँदैन । जबकी उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न औषधीको सेवन गर्ने व्यक्तिले भने चिकित्सकको सल्लाहमा मेवा अवश्यक खान सक्छन् ।
५. मिर्गौलाको पथ्थरी:विभिन्न अध्ययनहरुले जनाए अनुसार अत्याधिक मात्रामा भिटामिन ‘सी’को सेवनले मिर्गौलामा पथ्थरी हुनसक्छ । र, मेवामा भिटामिन ‘सी’अत्याधिक मात्रामा हुने भएकोले यसको सेवनले मिर्गौलामा पथ्थरी हुनसक्छ ।६. पेट खराब भएमा:पेट खराब भएमा पनि मेवाबाट टाढा रहनु पर्छ । त्यस्तै, पखाला लागेमा पनि मेवाबाट टाढा रहनु पर्छ ।किनकी यसले समस्या कम हुनुको सट्टा झनै बढ्न सक्छ ।७. मुटु सम्बन्धि समस्या:मुटु सम्बन्धि समस्या भएका व्यक्तिले पनि मेवाबाट टाढा रहनु पर्छ । विशेषगरी, रगत पातलो हुने व्यक्तिले मेवाबाट कुनै पनि हालतमा टाढा रहनै पर्छ ।८. घाँटीको समस्या:घाँटीको समस्या हुने व्यक्तिले मेवा खानु हुँदैन । यसले घाँटीलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।